Ọbụghị Onye Nkatọ Na-atụle | Martech Zone
Ọ bụghị Onye Nkatọ Na-agụ Ya
Ọ bụghị ndị na-akatọ ya ka ọ na-agụ; ọbụghị nwoke na-arụtụ aka etu nwoke siri ike sụọ ngọngọ, ma ọ bụ ebe onye na-eme ihe gaara arụ ya karịa. Ekele diri nwoke ahu no na mbara ebe ahu, nke aja na ajirija na obara mebiri ihu ya, onye na-agbasi ike ike; onye na-emehie ma na-abịa mkpụmkpụ ugboro ugboro; n’ihi na enweghị mgbalị n’enweghị njehie na adịghị ike; ma onye na-agbasi mbọ ike ime omume ahụ; onye maara oke ịnụ ọkụ n'obi, nnukwu nraranye, onye tinyere onwe ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị, onye kachasị mma mara na njedebe mmeri nke nnukwu nweta na onye kachasị njọ, ọ bụrụ na ọ daa, opekata mpe ọ dara mgbe ọ na-atụ ụjọ nke ukwuu. Nke mere na onodu ya agagh adi na ndi nkpuru obi obi ojo na ndi na-amaghi mmeri ma obu mmeri. Theodore Roosevelt
N'abalị ikpeazụ, m na-abịa maka Teknụzụ Ọrụ Mira. Nke a bụ onyinye mpaghara maka obodo teknụzụ dị na Indiana. Gwọ ndị ahụ dị mma ma ọ dị mma ịhụ ụlọ ọrụ atọ m rụkọtara - Kpọmkwem Ngwaọrụ, Imavex na Bluelock - mee ka amata ha maka nnukwu ọrụ ha na-arụ. Enweghị ihe ndabara na onyeisi ụlọ ọrụ atọ maka ụlọ ọrụ ndị a bụ ụfọdụ n'ime ndị kacha ukwuu m hụtụrụla.
Bob Compton mechiri mgbede ahụ, na-enweta onyinye a na-ebi ndụ, ma na-enye ọmarịcha okwu dị n'elu. Ọ bụ nkwupụta na ọ na-edebe na obere akpa ya ma na-ekenye onye ọchụnta ego ọ bụla ọ hụrụ.
Tags: nchịkọta akụkọfacebook mgbasa ozinjirimara googleNdagwurugwu Mediaime nnyochairumbido izu ụkaiche ihu igweWebexyoast
Textbroker ebupụtara Free Unique Afọ Nyochara